ENGLAND VS GERMANY: Kulamadii xiisaha badnaa ee xalay & kulanka adag ee caawa (Tebintii Xaaji) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ENGLAND VS GERMANY: Kulamadii xiisaha badnaa ee xalay & kulanka adag ee...
ENGLAND VS GERMANY: Kulamadii xiisaha badnaa ee xalay & kulanka adag ee caawa (Tebintii Xaaji)
(Hadalsame) 29 Juun 2021 – Waxaa caawa mar kale la isku callaqi doonaa laba xul oo ka mid ah qoryaha waawayn ee qaaradda Yurub, marka ugu yaraan dhanka warqadda laga eego, waana Ingiriiska iyo Jarmanka.
Balse inta aynaan warbixintaa kaa dherjin ayna xuf ku dhaafno kulamadii xiisaha badnaa ee xalay ka yaabiyey inta ku xiran ciyaarta kubadda cagta.
Waxaa kulamadii xalay iyo kulanka caawa ee England iyo Germany warbixintan ka diyaariyey Maxamed Xaaji.
Previous articleShirka Afisyooni oo maalintii 2-aad galay (Qodobbo ay madaxda qaar wataan)
Next articleAustralia oo hadda soo bandhigtay SIR ay qarinaysay 39 sano & Israel oo eedda yeelatay! (Somalia oo ay wax kasoo gaari karaan?)